Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » UNWTO na-ekwupụta ndepụta kacha mma njem nlegharị anya 2021
Njem njem • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ihe atụ kacha mma nke obodo ndị na-anabata njem nlegharị anya iji nye ohere ma kwalite mmepe na-adigide ka e mere ememe na Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO) Nzukọ General na Madrid.
UNWTO ekwupụtala ndepụta nke "obodo nlegharị anya kacha mma" 2021 na Madrid. Ndepụta a gụnyere obodo 44 sitere na mba 32 gafee mpaghara ụwa ise.
Obodo nlegharị anya kacha mma site na UNWTO ewepụtara atụmatụ iji kwalite ọrụ njem nlegharị anya n'ichekwa obodo ime obodo, yana odida obodo ha, ụdị okike na omenala dị iche iche, na ụkpụrụ na ihe omume mpaghara ha, gụnyere mmụta gastronomy mpaghara. Obodo ndị a pụtara ìhè maka akụrụngwa okike na omenala ha, ewezuga omume ọhụrụ ha na-agbanwe agbanwe na ntinye aka na mmepe nke njem nlegharị anya n'usoro. Ebumnuche mmepe na-adịgide adịgide (SDGs).
Ndị ụlọ ọrụ ndụmọdụ nọọrọ onwe ha tụlere obodo ndị a dabere n'usoro ihe atụ: omenala na akụrụngwa; nkwalite na ichekwa akụ omenala; nkwado akụ na ụba; nkwado mmadụ; nkwado gburugburu ebe obibi; ikike njem nlegharị anya na mmepe na njikọta ọnụ ahịa; ọchịchị na ụzọ njem nlegharị anya; akụrụngwa na njikọta; na ahụike, nchekwa na nchekwa.
Obodo 44 niile nwetara ngụkọta nke 80 ma ọ bụ karịa n'ime 100 enwere ike ime atụmatụ a gụnyere ogidi atọ.
'Ogbe ndị njem nlegharị anya kacha mma nke UNWTO': Ọ na-amata obodo ndị bụ ihe atụ pụtara ìhè nke njem nlegharị anya ime obodo nwere akụ omenala na ihe okike mara mma, nke na-echekwa ma na-akwalite ụkpụrụ ime obodo na nke obodo, ngwaahịa na ụdị ndụ ma nwee nkwenye doro anya maka mmepụta ọhụrụ na nkwado n'akụkụ ya niile - akụ na ụba. , ọha na eze na gburugburu ebe obibi.
Obodo nlegharị anya kacha mma site na mmemme nkwalite UNWTO: Mmemme nkwalite ahụ ga-erite uru ọtụtụ obodo na-emezughị oke iji nweta nnabata. Obodo nta ndị a ga-enweta nkwado site n'aka UNWTO na ndị mmekọ ya n'ịkwalite ihe ndị dị na mpaghara ndị a chọpụtara dị ka oghere dị na usoro nyocha.
Obodo nlegharị anya kacha mma nke UNWTO Network: Netwọk ahụ ga-enye ohere maka mgbanwe ahụmahụ na omume ọma, mmụta, na ohere. Ọ ga-agụnye ndị nnọchianya nke obodo ndị a ghọtara dị ka 'Obodo Nleta Kasị Mma nke UNWTO', obodo nta ndị na-ekere òkè na mmemme nkwalite, yana ndị ọkachamara, ndị ọrụ ọha na eze na nkeonwe na-arụ ọrụ n'ịkwalite njem nlegharị anya maka mmepe ime obodo.
Ngụkọta obodo 174 ka mmadụ iri asaa na ise tụpụtara ya UNWTO Steeti ndị otu (State ndị otu ọ bụla nwere ike wepụta kacha nke obodo atọ) maka atụmatụ pilot 2021. N'ime ndị a, UNWTO ghọtara 44 dị ka obodo nlegharị anya kacha mma. Obodo iri abụọ ọzọ ga-abanye na mmemme nkwalite nke atụmatụ a. Obodo iri isii na anọ niile na-abanye ka ha bụrụ akụkụ nke UNWTO Obodo Nleta Nleta Kasị Mma. Mbipụta na-esote ga-emeghe na February 20.